Izinto ezisigcinayo kunye nee-Antioxidants Suppliers kunye neFektri | I-China i-Preservatives kunye ne-Antioxidants Abavelisi
Igama leMveliso I-Sorbic Acid CAS No. 110-44-1 EINECS No. 203-768-7 Inkangeleko yeenaliti ezingenambala okanye umgubo omhlophe ohamba ngokukhululeka, unephunga elineempawu ezimbalwa zokutya kwiBakala lokutya MF C6-H8-O2 Ubunzima 25kg / ingxowa yeshelf Life 2 Isatifikethi seminyaka i-HACCP, i-ISO, i-KOSHER, i-HALAL Ukupakisha iingxowa ezingama-25kg I-Sorbic Acid inyibilika emanzini kwaye inokusetyenziswa njengezigcinayo. I-Sorbic Acid inokusetyenziswa ngokubanzi njengesixhobo sokutya okanye isongezo sokutya kubomi bethu bemihla ngemihla. I-Sorbic Acid ikakhulu u ...
Inkcazo: igranules emhlophe, umgubo wekristall okanye iiflakes. Ayinamphunga okanye inevumba elincinci le-benzoin. Uzinzile emoyeni. Ngokunyibilika ngokulula emanzini (53.0g / 100ml, 25 ℃). I-Soluble kwi-ethanol (i-1.4g / 100ml) .pH yesisombululo esinamanzi ayi-8. Ukuvunda kwayo i-resistanc kunye ne-sterilizability ibuthathaka kune-benzoic acid. Xa i-pH ikwi-3.5, isisombululo se-0.05% sinokumelana ngokupheleleyo nokukhula kwegwele. Xa i-pH ikwi-6.5, uxinzelelo olungaphezulu kwe-2.5% luyafuneka. Sebenzisa: Ukulondolozwa; arhente biocide ukuxhathisa. 1 ....
Vitamin c Powder Iascorbic Acid
Ukucaciswa kwe-cation: GB14754-2010, BP / EP / CP / USP / E300 / FCC7 Ubungakanani bokuPakisha: 25KG / iCarton technical Data Sheet (TDS) yeAscorbic Acid (Vitamin C) yorhwebo: C Ascorbic Acid igama leKhemikhali: (5R) -5 - [(1S) -1,2-dihydroxyethyl] -3,4-dihydroxfuran-2 (5H) -one Chemical Formula: C6H8O6 Ubunzima beMolekyuli: 176.1 Inkangeleko: Mhlophe okanye phantse mhlophe, ikristale yomgubo okanye iikristale ezingenambala, ziba mnyama ngombala emoyeni kunye nokufuma. Ukunyibilika: Sinyibilika ngokukhululekileyo emanzini, sinyibilike kancinci kwi-ethanol (96%). UMeltin ...
Package 25kg / ibhegi okanye ngokwemfuneko abaxumi. Ukuhambisa ngenqanawa ngolwandle / ngekhuriya / ukuGcina umoya kugcinwe kwindawo epholileyo. Gcina isikhongozeli sivaliwe sigcinwe kwindawo eyomileyo, engenisa umoya. Isodiyam dehydroacetate yi-arhente ye-antibacterial enokhuseleko oluphezulu, uluhlu olubanzi lwe-antibacterial kunye namandla anamandla okulwa neentsholongwane. Ayichaphazeleka kangako yi-acidity kunye ne-alkalinity yokutya, kwaye inokugcina isiphumo se-antibacterial ephezulu phantsi kweemeko ze-Chemicalbook ezine-asidi okanye ezincinci. Yintsholongwane yayo ...
I-Nisin sisilondolozi sokutya esaziwayo kwihlabathi liphela.Ngoko i-Nisin (ekwabizwa ngokuba yi-Streptococcus lactic peptide) yi-polypeptide, iyasebenza ngokukhawuleza emathunjini yi-enzymes yokwetyisa emva kokutyiwa, Uvavanyo olunzulu lwe-micro-biological alubonisanga ukumelana nomnqamlezo. I-Nisin inomsebenzi we-antimicrobial ngokuchasene noluhlu olubanzi lweentsholongwane ze-Gram kunye ne-spores zazo ezibangela ukonakala kokutya, kwaye ngakumbi zithintela i-bacilli enganyangekiyo kubushushu, njenge-B. Stearother ...
Isodium diacetate yikristale emhlophe enephunga leasile, kulula ukufunxa ukufuma, inyibilike kakhulu emanzini, ifudumele ngaphezulu kwe-150 ° C ukubola, okutsha, okuzinzileyo phantsi kweemeko ezipholileyo nezomileyo. Isodium diacetate ikakhulu ixhomekeke kuboleko lweemolekyuli zeasic acid ukuba nefuthe elichasayo, elinamandla okuthintela intsholongwane kunye nokubumba. Isodium diacetate yeyento ye-ADI engachazwanga kwaye ichongiwe njenge-GRAS yinto yi-US FDA. Isodium diacetate yimolekyuli ...
Ixabiso leCalcium Acetate njengokongezwa kokutya ngamakristali amhlophe afana neenaliti, igranules okanye umgubo. Kancinci i-acidodor. Incasa krakra kancinci. Isesichengeni sokufuma. Ngaphantsi kwe-150 ° C ayilahli konke ukufuma, njengobushushu ukuya kwi-160 ° C, ukubola kwi-acetone kunye ne-iodine, i-calcium. I-Soluble emanzini, inyibilike kancinci kwi-ethanol. 0.2mol / L isisombululo samanzi sepH 7.3. Ukupakisha kunye nokuPakisha ngenqanawe: 25kg ipakishwe kwimigqomo yamaphepha, ibhokisi, iingxowa. Ukuhambisa ngenqanawe: EMS, DHL, NguLwandle, njl. Ngokwe thethwano 1. I-calcium ...
Sodium Erythorbate Packaging 25KG / ibhokisi Sodium Erythorbate yoGcino gcina amaqondo obushushu asezantsi kwaye uphephe ukukhanya kwelanga I-Sodium Erythorbate yi-White crystalline powder, Ityuwa kancinci. Kuzinzile emoyeni kwimeko eyomileyo. Kodwa kwisisombululo, iya konakala phambi komoya, ukulandelela isinyithi, ubushushu kunye nokukhanya. Indawo yokunyibilika ngaphezulu kwama-200 ℃ (ukubola). Ukunyibilika ngokulula emanzini (17g / 100m1). Phantse ungenakunyibilika kwi-ethanol. Ixabiso le-pH yesisombululo se-2% samanzi si-5.5 ukuya ku-8.0. Isetyenziswa njengokutya ...
iiglass zekristale ezimhlophe okanye umgubo wekristale. ngaphandle kwevumba; ine-hygroscopicity, inyibilika ngokulula emanzini, ayinyibiliki kwiziselo ezinxilisayo. Ukupakisha kweCalcium propionate: 25kg nganye yekraft bag 17MT / 20'FCL ngaphandle kwepallet. (umgubo) i-14mt net nge-20'FCL nganye nge pallet. (umgubo) 20mt net nge 20'FCL ngaphandle kwe pallet. (granule) 16mt net 20'FCL with pallet. (granule) Storage & Transport of Calcium propionate: Egcinwe kwindawo yokugcina impahla eyomileyo, ekrwada kunye necocekileyo; khusela kufuma nobushushu; igcinwe kude kubugcisa obunetyhefu ...
Inkcazo: Isodium Lactate 867-56-1,72-17-3 yityuwa yesodiyam ye-L (+) i-lactic acid eveliswa kukuvunda. Isisombululo esicacileyo, esingumxube kunye nesiraphu. I-sodium lactate ibhaliswe eYurophu njengesongezo sokutya kunye nesalathiso se-E325. Le mveliso ihambelana neenkcazo zeCodex yokutya kweKhemikhali (FCC V). Iimpawu zeekhemikhali zomzimba Igama lechiza 2-Hydroxypropanoic acid, ityuwa ye-monosodium Ubunzima be-molekyuli 112.06 g / mol yeFomula yeMolekyuli C3H5O3 Na Ubhaliso ...
Ukutya okuDibanisa iSodium Succinate Dibasic / Disodium Succinate
Ukutya okuDibanisa iSodium Succinate Dibasic / Disodium Succinate Disodium succinate, efinyezwe njenge-WSA, eyaziwa njenge-scallop, yiarhente enevumba elisetyenziswa kakhulu ekumungeni. Ixhaphake kakhulu kwizilwanyana zaselwandle ezinje ngeembaza, ngoononkala, nononkala, kwaye idlala indima ebalulekileyo kwincasa emnandi yokutya okunjalo. Ukongeza, i-disodium succinate ikwakhona nakwezinye izityalo, ezinje ngamakhowa. Imigangatho yococeko lokutya lwaseTshayina echaza ukuba inokusetyenziselwa ii-condiment. I-Disodium s ...